Penguin 2.0: Zvinhu zvina zvaunofanira Kuziva | Martech Zone
Zvakaitika. Neimwe blog post, kuburitswa kwealgorithm, uye maawa mashoma ekugadzirisa, Penguin 2.0 yakaburitswa. Iyo Internet haizove yakafanana. Matt Cutts akaburitsa kapfupi chinyorwa pamusoro wenyaya muna Chivabvu 22, 2013. Heano mana akakosha mapoinzi aunofanirwa kuziva nezve Penguin 2.0
1. Penguin 2.0 yakakanganisa 2.3% yemibvunzo yese yeChirungu -US.
Kunze kwekuti 2.3% kurira kwauri senge nhamba diki, ramba uchifunga kuti kune fungidziro dzekutsvagiswa kweGoogle pazuva. 5% yemabhiriyoni mashanu yakawanda. Imwe chete bhizinesi rebhizimusi yekutengesa saiti inogona kutsamira pamakumi mazana maviri nemakumi mashanu emibvunzo dzakasiyana yemigwagwa yakawanda nemari. Iko kukanganisa kwacho kwakakura kupfuura kungaitwa nekashoma nhamba yedesimali.
Nokuenzanisa, Penguin 1.0 yakakanganisa 3.1% yeese mawebhusaiti. Rangarira mhedzisiro ine njodzi yeizvozvo?
2. Mimwe mibvunzo yemitauro inobatwawo nePenguin 2.0
Kunyangwe ruzhinji rweGoogle mibvunzo ruchiitiswa muChirungu, kune mazana emamiriyoni emibvunzo inoitiswa mune mimwe mitauro. Google's algorithmic kukanganisa inowedzera kune mimwe mitauro, ichiisa kibosh yakakura pawebhupampam pasirese yepasirese. Mitauro inooma zvikamu zvepamusoro zvewebhupamhu zvinokanganiswa zvakanyanya.
3. Iyo algorithm yakachinja zvakanyanya.
Izvo zvakakosha kuti urambe uchifunga kuti Google ine zvizere yakachinja algorithm muPenguin 2.0. Uku hakusi kungo dzoreredza dhata, kunyangwe iyo "2.0" yekupa zita chirongwa ichiita kuti zviite saizvozvo. Iyo algorithm nyowani zvinoreva kuti mazhinji eakare spammy tricks haangashande zvekare.
Zviripachena, ino haisi nguva yekutanga kusangana naPenguin. Heano bara-poindi nhoroondo yePenguin.
Kubvumbi 24, 2013: Penguin 1. Yekutanga Penguin yekuvandudza yakauya musi waApril 24, 2012, uye yakabata zvinopfuura 3% yemibvunzo.
May 26, 2013: Penguin kugadzirisa. Kwapera mwedzi, Google yakazorodza algorithm, iyo yakakanganisa chidimbu chemibvunzo, yakatenderedza 01%
Gumiguru 5, 2013: Penguin kugadzirisa. Mukudonha kwa2012, Google yakagadzirisa iyo data zvakare. Ino nguva yakatenderedza 0.3% yemibvunzo yakanganiswa.
Chivabvu 22, 2013: Penguin 2.0 kuburitswa, inokanganisa 2.3% yemibvunzo yese.
Sokutsanangura kwakaita Cutts nezve 2.0, "Chizvarwa chitsva chealgorithms. Iyo yapfuura iteration yePenguin yaizongo tarisa chete kune iyo pamba peji resaiti. Chizvarwa chitsva chePenguin chinoenda zvakadzika uye chine simba rakakura mune dzimwe nzvimbo diki. ”
Varidzi veWebhu vanokanganiswa naPenguin vanozonzwa kukonzeresa zvakanyanya, uye zvingangotorawo yakareba yakareba kuti vadzokere. Iyi algorithm inoenda yakadzika, zvichireva kuti kukanganisa kwayo kunodonhedzera pasi kune angangoita peji rega roga mukukanganisa.
4. Kuchave nekuwanda kwePenguin.
Hatina kunzwa kwekupedzisira kwePenguin. Tinotarisira kuti zvimwe zvigadziriswe zvealgorithm, sezvakaitwa neGoogle neese algorithmic shanduko yavakamboita. Maalgorithms anoshanduka neiyo inogara ichichinja nharaunda nharaunda.
Matt Cutts akataura, "Tinogona kugadzirisa zvinoitika asi isu taida kutanga padanho rimwe uye tobva tagadzirisa zvinhu nenzira kwayo." Mumwe mutsinhiri pane rake blog akabvunza zvakanangana nezvekuti Google ichave iri “kuramba kukosha kumusoro kwerwizi rwekubatanidza spammers,” uye VaCutts vakapindura, “izvo zvinouya gare gare.”
Izvi zvinoratidza kuwedzera kuwedzera uye, pamwe, kune vamwe kusununguka, kwesimba kwePenguin 2.0 pamusoro pemwedzi mishoma inotevera.
Mazhinji madzishe ewebhu uye maSEO anga achinetsekana nekushatirwa kwakashata kweanoshandura algorithm pane yavo saiti ine hutano. Vamwe vemawebhumasters vari mune niches iyo iri kushambira muwebhu webpam. Ivo vapedza mwedzi kana makore vachigadzira zvirimo zvirimo, vachivaka masimba emhando yepamusoro, uye vachigadzira saiti yepamutemo. Asi, nekuburitswa kwealgorithm nyowani, ivo vanowana zvirango, futi. Mumwe mukuru webiz webhuku akachema-chema achiti, "Hwakanga huri upenzi kwandiri here kuisa mari gore rapera kuvaka nzvimbo yechiremera?"
Mukunyaradza, Cutts akanyora, "Tine zvimwe zvinhu zvinouya gare gare chirimo chino izvo zvinofanirwa kubatsira nerudzi rwemasaiti iwe aunotaura, saka ndinofunga wakaita sarudzo chaiyo yekushandira kuvaka masimba."
Nekufamba kwenguva, iyo algorithm inozopedzisira yabata newebhupampam. Panogona kunge paine dzimwe nzira dzekutamba mutambo, asi iyo mitambo inouya ichisimudza apo Panda kana Penguin vanofamba vachienda kubhora-munda. Zvinogara zvakanaka kuteerera mitemo yemutambo.
Uri kubatwa nePenguin 2.0 here?
Kana iwe uri kushamisika kunyangwe Penguin 2.0 yakukanganisa, unogona kuita ongororo yako wega.
Tarisa yako keyword rankings. Kana vakaramba zvakanyanya kutanga muna Chivabvu 22, pane mukana wakanaka wekuti yako saiti inokanganiswa.
Wongorora mapeji akagashira chinonyanya kubatanidza kuvaka chivakwa, semuenzaniso peji rako repamba, peji rekushandura, peji renyaya, kana peji rekumhara. Kana traffic yakadzikira zvakanyanya, ichi chiratidzo chePenguin 2.0 kukanganisa.
Tarisa chero chinogoneka chinzvimbo chinongedzo chemakiyi makuru mapoka pane kungoita chaiwo mazwi. Semuenzaniso, kana iwe urikuda kurongedzerwa "windows vps," pane kuongorora mazwi akakosha akadai se "windows vps hosting," "tora windows vps kubata," uye mamwe akafanana mazwi.
Tevera yako organic traffic yakadzika uye yakafara. Google analytics ishamwari yako paunenge uchidzidza yako saiti, uyezve wozopora kubva pane chero chinokanganisa. Chengetedza zvakanyanya kune chikamu che organic traffic, uye ita saizvozvo kune ako ese makuru saiti mapeji. Semuenzaniso, tsvaga kuti ndeapi mapeji anga aine huwandu hwakanyanya hwe organic organic mukati memwedzi waApril 21-Chivabvu 21. Wobva watsvaga kana idzi nhamba dzakanyikwa kutanga kwaMbudzi 22.
Mubvunzo wekupedzisira hausi "ko ini ndakakanganiswa here," asi "ndoitei zvino zvandabatwa?"
Kana iwe wakakanganiswa nePenguin 2.0, hezvino izvo zvaunofanirwa kuita:
Maitiro Ekudzoreredza kubva kuPenguin 2.0
Step 1. Zorora. Zvichava zvakanaka.
Step 2. Ziva uye bvisa spammy kana yakaderera-mapeji mapeji kubva kuwebsite yako. Kune peji rega rega pane yako saiti, zvibvunze kana ichinyatso kupa kukosha kune vashandisi kana kuti ingangove iripo sekutsvaga injini furu. Kana iyo mhinduro yechokwadi kana yekupedzisira, saka iwe unofanirwa kuwedzera kana kuibvisa zvachose kubva kune yako saiti.
Step 3. Ziva uye bvisa spammy inbound zvinongedzo. Kuti uone kuti ndeapi maratidziro angave ari kudzikisira masosi ako uye zvichikonzera kuti ubatwe nePenguin 2.0, uchafanira kuita inbound link profile odhita (kana kuve nehunyanzvi zviitire iwe). Mushure mekunge maona kuti ndeapi maratidziro anoda kubviswa, edza kuabvisa nekutumira tsamba kumawebhusaiti uye nekuvakumbira zvine mutsigo kuti vabvise chinongedzo kuwebhusaiti yako. Mushure mekupedza kwako kukumbira kwekubvisa zvikumbiro, ita shuwa kuti usazvizivise futi, uchishandisa Chishandiso cheGoogle Disavow.
Step 4. Shingairira mushandirapamwe nyowani yekubatanidza yekuvaka. Iwe unofanirwa kuratidza kuGoogle kuti webhusaiti yako yakakodzera kukwirisa kumusoro kwemhedzisiro yekutsvaga. Kuti uite kudaro, iwe unozoda mamwe akavimbika mavhoti ekuvimba kubva kune anovimbika echitatu mapato. Aya mavhoti anouya muchimiro chekubatanidza zvinopinda kubva kune vamwe vaparidzi vanovimbwa neGoogle. Ratidza kuti ndevapi vaparidzi vanogadzwa neGoogle kumusoro kwemhedzisiro yekutsvaga kwemazwi ako ekutanga uye vataure navo nezve kuita yavo blog blog.
Sangano rakasimba reSEO kuenda kumberi richaramba kubvuma kana kuita matema ngowani matekinoroji. Ichabvuma uye nekubatanidza iyo 3 mbiru dzeSEO munzira inowedzera kukosha kune vashandisi uye inosimbisa kuvimba, kuvimbika, uye chiremera. Tarisa pane zvine simba zvemukati, uye shanda chete ine mukurumbira SEO mamiririri ane yakaratidza rekodhi yekubatsira nzvimbo kuti dzibudirire.
Kutanga Kubata, Kubata kwekupedzisira, Multi-Kubata
Kushambadzira Buzzwords kubva Mashable